कोरोना उपचारको आश : ‘रेमडिसिभिर’ नेपालमा किन ढिला? – Health Post Nepal
२०७७ साउन ३१ गते ११:१७
कोरोना संक्रमणबाट सिकिस्त भएर विराटनगरबाट काठमाडौं आएका विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीको उपचारमा ‘रेमडिसिभिर’ औषधी चलाइयो।
उनी अहिले खतरामुक्त छन्। यद्यपि, पहिलोपटक ‘प्लाज्मा थेरापी’ पनि उनमै गरिएको थियो।
कोरोनाका बिरामीमा यो दुइटै ‘ट्रायल’ लगभग सफल भएको छ।
शिक्षण अस्पतालकै अर्का एकजना बिरामीमा पनि रेमडिसिभिर चलाइएको छ र उनको अवस्था पनि ‘सुधारोन्मुख’ भइरहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।
तर, यो औषधी सरकारले चलाउने अनुमति भने अझै दिएको छैन।
तर, रोकेको पनि छैन। कोरोना संक्रमितकै लागि भनेर अहिलेसम्म नेपालमा यो औषधी सरकारले ल्याएको छैन।
धेरै दबाबपछि मात्रै औषधी व्यवस्था विभागले चार दिनअघि एउटा सूचना निकालेर रेमडिसिभिर नेपालमा भित्र्याउने बाटो खोलेको छ।
तर, यसलाई पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’ का रूपमा मात्रै भनेको छ।
यसको मतलब जहाँ पायो त्यहाँ र जोसुकै कोरोना संक्रमितलाई यो औषधी फ्याट्टै प्रयोग गर्न पाइने छैन।
रेमडिसिभिर के हो?
खासमा यो ‘इबोला’ भाइरस संक्रमितमाथि व्यापक प्रयोग गरिएको एउटा ‘एन्टिभाइरल’ औषधी हो।
यो सुईमार्फत दिइन्छ।
अमेरिकाको गिलियड साइन्सेस कम्पनीले सुरुमा यो रेमडिसिभिर औषधी ‘हेपाटाइटिस सी’ का लागि बनाएको थियो।
तर, हेपाटाइटिस सीका लागि रेमडिसिभिरले सोचेअनुसार काम गर्न सकेन। त्यसपछि यो त्यत्ति धेरै प्रयोगमा थिएन।
सन् २००३ मा अफ्रिकी देशमा इबोला भाइरस महामारी फैलियो।
त्यसपछि त्यो भाइरसको असर कम गर्न भाइरस प्रभावित निकै गम्भीर बिरामीमा रेमडिसिभिर प्रयोग गरिएको थियो।
त्यसले निकै राम्रो ‘प्रभाव’ देखाएपछि इबोला भाइरसका बिरामीमा यसको व्यापक प्रयोग भयो।
कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि?
उत्पत्तिसँगै चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमण व्यापक भइरहेका बेला यो एन्टिभाइरल रेमडिसिभिर फेरि एकपटक प्रयोगमा आयो।
त्यो बेला कम्पनीले ५ हजार डोज वुहानमा पठाएको थियो, परीक्षणका लागि।
वुहानमा ‘शान्त’ हुँदै गएको कोरोना भाइरस त्यसपछि विश्वभरि फैलिन थाल्यो।
केही महिनामै कोरोना संक्रमणले ‘विश्वव्यापी महामारी’ को रूप लियो।
दुनियाँभरका नाम कहलिएका डाक्टर–वैज्ञानिकले सुरुमा त भेउ नै पाएनन्, कोरोना के हो, कसो हो?
यही बेला एउटा विकल्प थियो– एन्टिभाइरल रेमडिसिभिर चलाउने।
वुहानको समुद्री तटमा बिदा मनाएर फर्किएपछि एकजना ३५ वर्षे अमेरिकी नागरिकमा संक्रमण देखियो।
त्यसपछि उनमा यो रेमडिसिभिर प्रयोग गरियो।
त्यसको प्रतिफल ‘आसालाग्दो’ भयो, उनलाई निको नै भयो।
पछि अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडिए) ले पनि यसको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि भन्दै प्रयोग खुला गरिदियो।
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित देश अमेरिका हो।
अहिले भारत, अमेरिका तथा युरोपेलीलगायत ५० भन्दा बढी कोरोना प्रभावित देशले संक्रमितका लागि यो औषधी चलाइरहेका छन्।
कस्तो बिरामीलाई रेमडिसिभिर?
कोरोनालाई फ्याट्टै निको पार्ने औषधी त अहिलेसम्म भेटिएको छैन।
केही समयअघि ‘हाइड्रोक्लोरोक्विन’ चर्चामा थियो। यो मलेरियाविरुद्धको औषधी हो।
भारतले सुरुमा कोरोना संक्रमितमा यो औषधी प्रयोग गरेपछि अमेरिका तथा बेलायतले पनि यसको प्रयोग गरेका थिए।
पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको प्रयोग खारेज गरिदियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विश्व स्वास्थ्य संगठनबीच थुप्रै लफडा पनि भयो।
त्यसपछि अहिले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि रेमडिसिभिर चर्चामा छ।
त्यो बेला भारतबाट थुप्रै हाइड्रोक्लोरोक्विन मगाएको ट्रम्प सरकारले त्यसपछि फेरि कम्पनीले उत्पादन गरेका रेमडिसिभिर आफंैले खरिद गरेको छ।
कम्पनी आफैंले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेच्न पाउँदैन।
बरु म्यानुफ्याक्चरिङका लागि अरू देशसँग सहकार्य गर्छ। भारत र बंगलादेशमा उत्पादन भइरहेको रेमडिसिभिरको सुत्र यही हो।
डा. विश्वराज दवाडीका अनुसार स्वासप्रश्वासमा समस्या भएर आइसियुमा राख्नेखालका बिरामीलाई यो औषधी दिँदा केही ‘राहत’ हुनसक्छ।
‘तर, भेन्टिलेटरमै गइसकेपछि चलाउनुको खासै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै संक्रमितलाई अनि जस्तोसुकै अवस्थामा यो औषधी चलाउने होइन।’
नेपालमा पनि देशभर ९२ जना आइसियुमा छन्। तीमध्ये केही बिरामीमा अहिले पनि रेमडिसिभिर चलाइएको छ। त्यसको प्रभाव पनि ‘राम्रै’ देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्।
नेपालमा रेमडिसिभिरको लफडा के हो?
खासमा सरकारले ‘आधिकारिक’ रूपमा यसको कुनै परीक्षण गरेको छैन।
बिरामीले आफ्नो ‘रिस्क’ मा यो औषधी लाखौं खर्च गरेर मगाइरहेका छन्।
जस्तो कि, शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत विराट मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. कार्कीले भारतबाट आफैं हवाईजहाज चार्टर गरेर यो औषधी मगाएका थिए।
अहिले प्रदेश २ मा यो औषधी प्रयोग भइरहेको छ। ‘हुनेखाने’ संक्रमितले भारतबाट लाखौं खर्च गरेर यो औषधी मगाइरहेका छन्।
यद्यपि, यो औषधी समान्यरूपमा बजारमा किनबेच गर्न पाइन्न।
भारतबाटै पनि यो ‘ब्ल्याक’ मै किन्ने हो। त्यसैले अहिले नेपालमा बिरामीले आफंै ल्याउन चाहेमा यसको कुनै निश्चित मूल्य छैन।
भारतले त्यसको मूल्य भारु ५ हजारजति तोकेको छ तर, नेपालका बिरामी आफैंले त्यसलाई ५० हजारभन्दा बढी तिरेर ल्याइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले त यो औषधी ल्याउने अनुमति नै दिएको छैन।
साउन २७ गते मात्रै औषधी व्यवस्था विभागले रेमडिसिभिर ल्याउन ‘आशयपत्र’ मागेको छ।
अब नेपालमा औषधी प्रयोगको बाटो यो सूचनाले केही सहज गरिदिएको छ। तर, समय भने लाग्छ।
‘संसारभरि चलिसकेको औषधी प्रयोग गर्न पनि सरकारले यत्रो समय किन लगायो?,’ डा. दवाडी भन्छन्, ‘संक्रमणको आगो बलिरहेको बेलामा यो औषधी सजिलोसँग प्रयोग गर्न पाइयो भने केही आसा पलाउने छ।’
मेडिकल काउन्सिलले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाएको उपचार निर्देशिकामा रेमडिसिभिर औषधीको प्रयोग गर्न सकिने पनि भनेको छ।
‘सरकार आफैंले उपचार पद्धतिमा औषधीको नाम राख्ने अनि औषधी नै नराख्ने, नल्याउने?,’ डा. दवाडी भन्छन्, ‘जो उपचारमा खटिइरहेको छ, जसले कोरोना संक्रमितलाई प्रत्यक्ष हेरिरहेको छ, ती चिकित्सकको रायसल्लाहमा यो औषधी प्रयोग गर्न किन नदिने?’
तर, नेपालका सन्दर्भमा यो औषधी ल्याउन अलि अप्ठ्यारो थियो।
त्यो के भने सुरुमा त नेपालले रेमडिसिभिर निःशुल्क ल्याएर परीक्षण गर्ने योजना बनाइरहेको थियो।
तर, त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को विभिन्न प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने थियो।
‘यो प्रक्रिया त निकै लामो हुने भयो। अनि डब्लुएचओले दिने भनेको निःशुल्क औषधी पनि नआउने भयो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘त्यही भएर ढिला भएको हो। अब सरकार आफैंले आयातकर्ता छानेर औषधी ल्याउँछ र परीक्षण गर्छ।’
रेमडिसिभिर कोरोना ‘निको’ पार्ने औषधी त होइन, निको हुने दर भने बढाउँछ।
यो विश्वव्यापी रूपमा परीक्षण सफल भइसकेको औषधी पनि होइन।
अहिले रेमडिसिभिर परीक्षणको तेस्रो चरणमा छ। अर्थात्, ‘ट्रायल फेज–३’ मा छ।
विश्वव्यापी परीक्षण सफल नभइसकेको अवस्थामा यो औषधी किनबेच गर्न भने पाइँदैन।
ढिलै भए पनि औषधी व्यवस्था विभागले नेपालमा परीक्षणका लागि रेमडिसिभिर ल्याउन ‘आशय’ आह्वान गरेको छ।
त्यसका लागि तीनवटा उत्पादक कम्पनी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा सूचीकृत भइसकेका छन्।
सूचीकृत भएका सिप्ला, मायलन र इटेरो कम्पनीमध्ये एक कम्पनीको नेपाल आयातकर्ताले अब रेमडिसिभिर नेपाल भित्र्याउनेछन्।
विश्वव्यापी परीक्षण चरणमै भएका कारण रेमडिसिभिरको मूल उत्पादक कम्पनी गिलियड साइन्सेसले एसियाका लागि बंगलादेश तथा भारतलाई पनि उत्पादन अनुमति दिएको छ।
यो औषधी नेपालमा पनि भारत र बंगलादेशबाटै आउने हो।
त्यसका लागि अब कम्तिमा दुई साताजति लाग्नेछ। त्यसपछि नेपालमा पनि एकदमै कोरोना संक्रमणका गम्भीर बिरामीमा रेमडिसिभिरको सजिलै परीक्षण सुरु हुनेछ।
पैसा त लाग्छ तर, बिरामीले तिर्नुपर्दैन।
सरकारले खर्च बेहोर्छ। किनकि, यो परीक्षणका लागि हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘हामीले पैसा लिनेगरी योजना बनाएका छैनौं। यो फ्रि अफ कस्ट हो। किनकि, यो औषधी सरकारले परीक्षण गर्ने हो।’
उनका अनुसार बिरामीको स्विकृतिमा मात्रै यो औषधी परीक्षण हुनेछ।
बेहोसै भएको बिरामीमा यो औषधी चलाउनैपर्ने भएमा बिरामीको आफन्तको स्विकृतिमा परीक्षण हुनेछ।
‘अरू देशले जस्तै हामीले पनि अहिले परीक्षण नै गर्ने हो। अन्य औषधीजस्तो खुला बजारमा बेच्ने वा पाइने होइन,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘अब विश्वव्यापीरूपमै परीक्षण सफल भयो भने बल्ल आयातकर्ताले नेपालमा औषधी ल्याउनेछन् र त्यसको प्रयोग सजिलो हुनेछ।’